Setimadi Dainikराजनीतिमा लागेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छु— सभापति ठकुरी - Setimadi Dainik
राजनीतिमा लागेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छु— सभापति ठकुरी
दमौली १ पुस,
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा तनहुँ जिल्ला त्यति सहज जिल्ला होइन । तनहुँ काग्रेसको राजनीतिमा गाउँ देखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म नेता तथा कार्यकर्ताहरु गुट विभाजित छन् । जसका कारण एउटा असली कार्यकर्ता भएर हिड्न यहाँ निकै गाह्रो छ । तर यहि तनहुँ जिल्लाको काँहुशिवपुरमा एक २९ बर्षिय ठिटो गाउँ कार्य समितिको सभापति बन्न सफल भएका छन् । उनी गाउँ तथा नगर सभापतिमा जिल्लाकै कान्छो सभापति समेत हुन । विद्यार्थी कालदेखि नै राजनितीमा होमिएका ठकुरी नेविसघं, तरुण दल हुदै हाल पाटीको राजनीतिमा सशक्त रुपमा अगाडि बढेका छन् । उनै ठकुरीसंग सेतीमादी दैनिकका संवाददाता प्रकाश अधिकारीले गरेको संप्क्षित कुराकानी ः
सेतीमादी ः राजनीति गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
ठकुरीः राजनिती गर्न निकै गाह्रो छ । न तलब हुन्छ नत भत्ता नै । सधै जनताको काम गरेर हिड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथी पनि सबैको चित्त बुझाएर काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । तैपनि राजनीतिमा लागे पछि त्यस्तो भन्न कहाँ पाइन्छ र ।
सेतीमादी ः तपाई त गाउँ कार्य समितिको सभापति, गाँउको विकास र संगठन विस्तारमा कत्तिको लागि पर्नु भएको छ ?
ठकुरी ः राजनीति गर्ने मान्छेलले सबैभन्दा पहिला जनताको मागलाई संम्वोधन गनुपर्छ। त्यसमा पनि गाउँका जनताको माग सम्बोधन गर्नु त्यति सहज छैन । गाँउमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र खानेपानी लगायतका विषयहरुको व्यापक समस्या छ । जनताले यि सुविधाहरु तत्कालै खोजिरहेको अवस्था छ । तर स्रोत साधानको अभावले पुरा गर्ने अवस्था छैन ।यस्तो अवस्थामा गाउँको विकास र पार्टीको संगठन बनाउन निकै गाह्रो भईरहेको छ । तैपनि हिम्मत नहारिकन लागि परेको छु ।
सेतीमादी ः तपाई सानै उमेर देखि राजनितीमा लाग्दा आफूलाई कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ ?
ठकुरीः म सानै उमेर देखि राजनितीमा लाग्दा जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्न अवसर पाएको छु । सानै उमेरमा राजनीतिमा लागेर जनताको सेवा गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी छु । मलाई विश्वास छ मेरो गाविसका जनताहरु मैले गरिरहेको काम प्रति सन्तुष्ट छन् ।
सेतीमादी ः तनहुँ कांग्रेसको राजनीति गुटउपगुटले भरिएको छ तपाई कुन गुटको नि ?
ठकुरीः सर्वप्रथम त गुटलाइ मौलाउन दिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति म हुँ । यसले राजनीति गर्ने मान्छे नेतामुखी बनाउँछ र कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउछँ । यसले पार्टीलाई गाँउ देखि केन्द्र तहसम्म ध्वस्त बनाउँदै जान्छ त्यसैले पार्टी भित्र गुटउपगुटको राजनीति अन्त्य गरिनु पर्छ ।
सेतीमादी ः तपाईलाई जिल्लामा सांसद धुव्र वाग्ले निकट भन्दा रहेछन् होइन र ?
ठकुरीः हाहा….। एउटै आमाले पाएका सन्तान त एउटै हुदैनन् । झन राजनीति हो । म धुव्र दाई संग व्यक्तिगत नजिक हुँला तर गुटलाइ प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म होइन । मलाई जोडेर कसैले नाम लिन्छन् भने त्यसमा मैले भन्नु केही छ्रैन ।
सेतीमादी ः अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ ?
ठकुरी ः अन्त्यमा सबै कांग्रेसी एक भएर जिल्लाको राजनितीमा सक्रिय रुपमा लागौं । तब मात्र काग्रेस बन्ने छ । गाँउ देखि जिल्लामा सम्म युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । राजनितीमा आफ्नो दुःख भुलेर पनि कार्यकर्ताको काम गनुपर्छ । पिछडिएका जनताको दुःखमा काम गरेर नजिक हुदै जानुपर्छ । तपाइको यस पत्रिकाबाट मेरा केही कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।